Ukubuyela esikoleni Iyiphi ithebhulethi engizoyithenga ukungisiza ngifunde? | Izindaba zamagajethi
Ukubuyela esikoleni Iyiphi ithebhulethi engizoyithenga ukungisiza ngifunde?
UMiguel Hernandez | | Tablets, I-Telephony
Idlala ithanga elibi kakhulu ezinganeni eziningi, kanye nokuba phambili kwabazali abaningi. Ukubuyela esikoleni sesifikile, sekuyisikhathi sokulungisa izinto ezidingekayo ukubhekana nenkambo entsha. Kodwa-ke, ubuchwepheshe bukhona nanamuhla kulaba abancane (futhi hhayi abancane kangako). Siqala ukubheka ukungenelela kwamadivayisi we-elekthronikhi anjengekhompyutha noma ithebhulethi edingekayo ukuze kuthuthukiswe ubuhlakani. Kulesi senzakalo, ngamathebulethi azothatha imininingwane eminingi. Isikhathi esihle sokwethula ezinye izindlela zokufunda ngobuchwepheshe Iyiphi ithebhulethi ongayithenga ukungisiza ngifunde? Ungaphuthelwa amathiphu ethu.
Okokuqala kunezici eziningana okufanele sizicabangele lapho sithengela indodana yethu ithebhulethi, noma nini thenga ithebhulethi Okwethu. Eyokuqala ngokungangabazeki iyiminyaka, kufanele sazi ukuthi ngabe abantu abasha bazokwazi yini ukubhekelela lo mshini onjalo, kanti okwesibili yimfuneko yokuthi sizophoqelela kuleyo divayisi.
1 Amathebulethi ezinsana futhi anesidingo esincane sobuchwepheshe
2 Amathebulethi wentsha kanye nesidingo esiphakathi / esiphakeme
3 Amathebulethi ochwepheshe nabafundi baseyunivesithi
4 Iziphetho lapho ukhetha ithebhulethi
Amathebulethi ezinsana futhi anesidingo esincane sobuchwepheshe
Lapha ngokungangabazeki kufanele sethule enye indlela ye- I-Amazon Fire, le thebhulethi engu-7 intshi ibiza ama-euro angu-59,99 kuphela Enguqulweni yayo engu-8GB yesitoreji, iyahambisana namakhadi e-MicroSD. Inenguqulo ye-Android eguqulwe yi-Amazon, futhi egxile ezincwadini. I-Amazon Fire inesikrini esihle esingu-7-intshi ku-1024 x 600 resolution (171ppp), enikwe amandla iprosesa ye-quad-core ne-1GB ye-RAM.
Ngakolunye uhlangothi, enye indlela yabancane yithebhulethi yezingane u-TIV Clan 2, ithebhulethi engu-7 intshi, eneprosesa enesizotha kanye ne-1GB ye-RAM. Vele, ihambisana nokuxhumeka kwe-microHDMI okuzosivumela ukuthi siyixhume kuthelevishini futhi sikujabulele okuqukethwe kwe-multimedia. Vele, kufanele sikhumbule ukuthi le thebhulethi izogcina iba ithoyizi kakhulu kunethuluzi lokufundisa, ikakhulukazi uma singekho ekulaleleni.
Amathebulethi wentsha kanye nesidingo esiphakathi / esiphakeme
Isikhungo siyaqala, futhi ngayo izinto ezintsha. Eqinisweni, izikhungo eziningi zijoyina izinhlelo zokwandisa ubuchwepheshe, ukufaka izinto ezithile zamathebulethi. Ngale ndlela, sizobheka ukuthi iziphi ezingcono kakhulu ezinganeni ezisencane ezisesikoleni esiphakeme, amaphilisi angazinika isandla ngokuya ngokuthuthuka kwazo kwezemfundo.
Okokuqala, asikwazi ukungazinaki i-iPad, yize singeke sicabangele uhlobo lwayo lwePro, sizohlala kuyo I-iPad Air 2, idivayisi enesikrini sokuxazulula iRetina, iprosesa yamandla amakhulu emakethe yamathebulethi, ukuxhumeka okugcwele nokuhambisana kwezesekeli i-Apple eqinisekisa ngazo. Intengo ingu- € 389 uma sisengathola idivayisi ye-16GB, ku-Apple Store kuthengiswa kuphela amadivayisi we-32GB kusuka ku- € 429. Into enhle ngokuba ne-iPad ukuthi inezinhlobo ezahlukahlukene kakhulu zezicelo zabo bobabili othisha nabafundi, ezinye izindlela eziningi kanye nentuthuko enhle kunazo zonke emuva kokugxila kwezemfundo. Ngale ndlela, i-iPad iyithuluzi elikhethwe iningi, ngaphezu kweqiniso lokuthi uhlelo olusebenzayo lusinikeza izindlela zokuthi osemusha akwazi ukuzisebenzisa kahle.
I-Asus ZenPad Z300C Kuyindlela eshibhile, kusuka ku- € 150 e-Amazon, sinethebhulethi engu-10-intshi nakho konke ukuxhumana okungaqondakala, okuhambisana ne-32GB yesitoreji sangaphakathi, iprosesa ye-Intel Atom X3 kanye nesisombululo se-1280 × 800 esinephaneli le-IPS. Ngeke siyishaye indiva i-RAM, i-2GB ezokwanela imisebenzi esingayicela. Akungabazeki ukuthi enye indlela eshibhile futhi edlalayo.
Amathebulethi ochwepheshe nabafundi baseyunivesithi
Nakulokhu futhi, siqala nge-apula. Sine-iPad Pro ngosayizi abangu-9,7-intshi no-12,9-intshi, kuya ngezidingo. Ithebhulethi ene-hardware enamandla kunazo zonke emakethe, ihambisana nezesekeli ezifana nekhibhodi ne-Apple Pencil, ipensela elizosivumela ukuthi sibhale njengephepha. Ngokuphathelene nekhamera, umsindo nentuthuko ezingeni lesoftware ngemuva asikungabazi. Inkinga ivela ngokulinganiselwa kwe-iOS, kuyiqiniso ukuthi iyithebhulethi enamathuba amaningi emakethe ngokwentuthuko, kepha i-iOS inciphisa kakhulu ezinye izindlela, futhi ukufuna ezinye izikhungo kuzoba nzima. Intengo iphezulu kakhulu, ngaphezulu kwe- € 600 kuzofanele siyikhokhele eyodwa.
Uma okufunayo kungukuhlukahluka, sethula ifayela le- UChuwi Hi12, i-PC yethebhulethi ene-Windows 10 ne-Android 5.1, ukuze sikwazi ukukhetha nganoma yisiphi isikhathi ukuthi yisiphi esivumelana nathi. Nge-4GB ye-RAM ne-64GB yesitoreji sangaphakathi (ukunwetshwa nge-microSD). Inakho konke esingakucela kwi-PC yethebhulethi ngentengo engafinyeleli kuma-250 ku-Amazon ngokwesibonelo, yize ungayithola ishibhile.
Iziphetho lapho ukhetha ithebhulethi
Ngokuya ngomuntu ozosebenzisa ithebhulethi, kungakuhle ukuthi uhambe phakathi kwamamodeli athile noma amanye.
Uma kwenzeka kuba Izingane zomphakathi, sincoma ukuthi kube ithebhulethi eshibhile ngangokunokwenzeka. Lokhu kungenxa yokuthi ukusetshenziswa abajwayele ukukwenza kuyinto eyisisekelo kakhulu futhi kunamathuba amaningi okuthi ithebhulethi izogcina yephukile ngenxa yokushaywa noma ukunganakwa kwengane. Ngibe nabashana kanye namaphilisi amabili noma amathathu akhokhisiwe ngalesi sizathu ngakho thatha okuthile okushibhile ube nekhava.
Uma izethameli zikhona osemusha noma ofuna ngenkani, Amaphilisi asezingeni eliphakeme imvamisa yiwona anconywa kakhulu ngoba angakwazi ukuphatha yonke into, ikhwalithi yawo yokukhiqiza iphakeme kakhulu futhi izohlala iminyaka eminingana ihamba ngokukhululeka. Kulokhu, kungukuthenga okukhokhelayo ngokuhamba kwesikhathi.
Uma izethameli zikhona ubuchwepheshe kanye nezidingo zehadiwe aziphezulu kakhuluKulokhu, kulula ukubheja kumathebulethi anikeza isikrini esikhudlwana nekhwalithi eyengeziwe.
Sithemba ukuthi izeluleko zethu bezilusizo kuwe, sishiye kumazwana uma kukhona ukungabaza noma okuhlangenwe nakho ngale ndaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » Tablets » Ukubuyela esikoleni Iyiphi ithebhulethi engizoyithenga ukungisiza ngifunde?
IMotorola yethula imodeli yayo emaphakathi nebanga, iMoto X4
ILogitech Craft ikhibhodi ephefumulelwe yi-Microsoft Surface Dial